IGoogle Analytics ithola i-Pretty Reporting Interface (Beta) | Martech Zone
ULwesibili, May 8, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngisanda kuthola inothi ebhokisini lami lokungenayo nokumangala okumnandi lapho ngivula iGoogle Analytics. Banobukhoma obubonakalayo be-beta obumangalisa kakhulu. Uma ngikhuluma iqiniso, ngangiqala ukuthanda Clicky ngenxa yokubika okukhulu. Lokhu kungangigcina nginamathele kuGoogle, noma kunjalo!
Nasi isixhumanisi sohambo lomkhiqizo sokubika okusha kwe-Google Analytics Beta.
I-Tiger Woods ayisebenzi ebuthakathakeni bayo
May 9, 2007 ku-3: 47 PM
Ngibheke phambili ekuboneni lokhu kusebenza lapho i-akhawunti yami ishintshelwa enguqulweni entsha. Ibukeka bushelelezi.
Nginesiqiniseko sokuthi ngeke udilize i-Clicky, khumbula nje lezo zixhumanisi ezilula ezikusa ngqo lapho kufika isivakashi khona, nokuhlanganiswa kwe-Feedburner 😉
May 9, 2007 ku-4: 23 PM
Ngisebenzisa uClicky ngePerancinging.com. Ngiyayithanda kakhulu kuze kube manje futhi ngithole unyaka mahhala wenkonzo ye-premium yokuyibuyekeza kubhulogi lami. Ngiyazibuza ukuthi ngabe iGoogle iqala ukukhathazeka ngenxa yazo zonke izinsizakalo ze-Stat ezivela ezibonakala zingcono kakhulu futhi okulula kakhulu ukusebenza nazo.
May 9, 2007 ku-6: 34 PM
Lokhu kubukeka kukuhle .. bakukhipha nini kodwa?
May 9, 2007 ku-6: 56 PM
Sengivele ngiyifinyelele ngaphakathi kwe-akhawunti yami Nsuku zonke. Bengilokhu ngisebenzisa ithani lemibiko ngalo futhi ngihlabeka umxhwele kakhulu! Ingabe ayitholakali ku-akhawunti yakho?
May 10, 2007 ku-2: 31 AM
I-interface entsha ikhishwa kancane kancane emasontweni ambalwa ezayo. Uma noma ngubani engasiboni isikhombimsebenzisi esisha okwamanje kufanele wenze maduzane.